Kusesandleni zethu ukulwisana negciwane | News24
Kusesandleni zethu ukulwisana negciwane
Osephile iminyaka eyi-17 negciwane leHIV uNomusa Shabane egqugquzela abantu ukuba badle imishanguzo basizakale. Izithombe: Zithunyelwe
USUKU lwe-World Aids Day luba njalo mhla lulunye kuZibandlela (1 Devember) minyaka yonke. Lolusuku lwaqala ukugujwa ngonyaka ka 1988. Umtholampilo wase Gamalakhe iGamalakhe Community Health Centre (GCHC) nomnyango wezempilo - Department of Health bagubhe lolu suku ngaphansi kwesiqubulo esithi “It is in our hands to end HIV and TB,” lokhu kusho ukuthi, “kusezandleni zethu ukuba siqede isandulela ngculazi kanye nesifo sofuba”. Lomcimbi ubuhanjelwe umphakathi, odokotela nabasebenzi bomtholampilo.
Okhulumela umtholampilo uMnuz Lifa Radebe uthe ngalolusuku kwadluliswa umyalezo othi isifo sofuba siyalapheka yize noma unesandulela ngculazi.
URadebe uthe ukuze kusizakale intsha ukuthi igweme isifo sengculazi, kumele imitholampilo ibe yindawo elungile efanelekile ukuthi intsha izizwe ikhululekile ukuzofuna usizo neziyalo ngokutheleleka kwalezifo.
“Aziphele izinkulumo ezehlisa isithunzi nesidima sobulili kubasebenzi bezempilo. Ake silethe lezinsiza kwintsha ukuze ikwazi ukuvikeleka kulesi sifo sengculazi,” kusho uRadebe. Uqhubeke waxoxa ngohlelo lomnyango oluqondene ngqo nokuhlolela ingculazi nokwelapha wonke muntu osenaso lesisifo ngaphandle kokuthi lithini izinga lamashosha omzimba wakhe.
UNksz Nomusa Shabane omunye wabaphila nalesifo, osephile naso iminyaka eyi-17, wethule ubufakazi wagqugquzela abantu ukuba badle imishanguzo yabo ngendlela efanele.